Zviri nyore kubira WhatsApp account | IPhone nhau
Zvekare zvakare, WhatsApp inotora nguva yedu nekuuya kwayo kwekuchengeteka uye zvinoitika, uye zvinongoda kuti vamwe vawedzere hunyanzvi hwavo kuti vazive kuti kwedu WhatsApp hurukuro hadzina kudzivirirwa zvakanyanya kupfuura zvatingafungidzira. Huwandu hukuru hwevashandisi hunogona kunge husina kudzivirirwa kubva kune vanoda kuziva vanoda kuona paWhatsApp yedu pasina mvumo yedu, uye zvechokwadi ndinoomerwa nekufunga kuti vakomana veWhatsApp vangadai vasina kufungidzira mukana uyu pamberi pevashandisi, kunyangwe pakufunga kwechipiri, kuri zvakanyanya mumutsara wavo.
1 Ndiri panjodzi yekuchengetedzwa uku?
2 Chii chandingaite kuti ndibise WhatsApp account?
3 Uye izvozvi?
4 Kubata kwenyasha
5 Ndipe mhinduro
6 Izvi zviri pamutemo here?
Ndiri panjodzi yekuchengetedzwa uku?
Mhinduro iri nyore, Voicemail ichave yakakosha mune ino puzzle, kana uine voicemail yakavhurwa uye usati wachinja iyo default PIN iyo inounzwa nebasa iriZvichava zvakakwana kuti chero munhu anoda kuba account yako anoziva yako nhamba yefoni (chimwe chinhu chine musoro kune rumwe rutivi) uye anoda kuzviita. Kana kunze kweizvi, iwe uine iCloud backup yekutaurirana kwako, iyo tsvina ichave yakazara.
Chii chandingaite kuti ndibise WhatsApp account?
Musiki mushandisi we vhidhiyo iyi Inotiratidza kuti sei.Nhanho yekutanga ine musoro sezvo iri nyore, isu ticha dhawunirodha WhatsApp application pane chishandiso chatiri kuda kuita kushamisika, kuisa chishandiso nguva dzose uye kutanga kuita kwacho. Kana tangobvumikisa kuti munhu watinoshandisa anoshandisa voicemail, tinotanga chirongwa chekunyoresa nenhamba yenharembozha yemunhu anenge abatwa kana iyo inosangana neiyo account yeWhatsApp.
Ipapo, isu tinomirira nemoyo murefu kwemaminetsi ekunyevera ayo WhatsApp anopa ekuti ishandiswe neSMS kodhi iyo mushandisi inogamuchira kuti ipfuure Kana maminetsi aya apfuura pasina kuisa kodhi, WhatsApp inotibvumidza kuendesa kodhi iyi kuburikidza nekufona kubva kune yakasununguka muchina iyo inoburitsa iyo yekushandisa kodhi zvishoma nezvishoma asi zvirokwazvo.
Tinoenderera mberi nekuverevedza muvoicemail yako, nekuti ichi chinhu chekutanga ndechekusimbisa nerubatsiro rweGoogle inova mushandisi iyo nharembozha ine voicemail yatinoda kupinza ndeyedu, dai taisazviziva zvakajeka. Kana tangowanikwa, tinoenda kuGoogle zvakare, mubhokisi rekutsvaga tinopinda «Voicemail nhamba ye (pano kambani yefoni)», pawakatipindazve nemuchina une hushamwari kwatinofanira kuisa nhamba dzenhare nePIN yebhokisi rezwi tsamba.
Apa ndipo patinorova pekukwirisa. Vazhinji vashandisi havamanikidze kuchinja PIN kodhi yezwi tsamba bhokisi, saka ichagadzwa nekumisikidza zvichienderana nekambani yega mumakodhi asina kuomarara akadai se "1234, 1111 kana 0000", Google ichatipa zvakare. ruoko kana tikatsvaga "default PIN yezwi tsamba ye (kambani yenhare)".
Iye zvino isu tinongova nechokwadi chekumisikidza WhatsApp panguva yatinoziva kuti mushandisi haasi kuzopindura iyi kufona, kungave nekuti vari kurara kana kune chero chimwe chikonzero. Iyi odhiyo yekuongorora kodhi ichaendeswa kubhokisi rezwi tsamba iro password uye kuwana kwatinazvo hongu, iri kungopinda nekubhururuka.
Zvinenge zvakapusa kana zvimwe kuzvidzivirira sekuvabira, heano mamwe matipi inobatsira kwauri.
Kana iwe uchinonoka uye account yako yatove mune mumwe munhu, danho rekutanga kumutsidzira chikamu pane chako chishandiso, icho chinobvisa chikamu kubva kune chimbo chembavha uye chinokutendera iwe kuti udzokere kune zvakajairwa., asi kana zvisingaite nekuda kwechimwe chikonzero kana chimwe, muchikamu chekubata cheiyo yepamutemo WhatsApp Inc webhusaiti unogona kuwana nzira dzekutaurirana nevatongi veWhatsApp vaunogona kutaura nezvenyaya yako uye ivo zvechokwadi vanoita zvese zvinobvira batsira iwe. Paunenge iwe watangazve kuwana kuaccount yako, usakanganwa kutora akakodzera matanho ekuchengetedza.
Izvi zviri pamutemo here?
Zviripachena ini ndoda kujekesa kune vane hunhu ve internet, avo vari vazhinji, kuti chinangwa changu nekuburitsa iyi ruzivo hachisi kure kure kukurudzira matsotsi kuti aite zviitwa izvi, hapana chiri kumberi kubva pachokwadi, basa rangu rinondidzivirira mutsika. kana kuzvifungidzira. Nebhuku rino ini ndinongoda kuratidza kuti zvakavanzika zvedu zvakafumurwa sei, uye kazhinji chete kana iwe ukaona nzeve dzemhumhi unotanga kutora zvimwe zvinhu zvisingaonekwe zvakanyanya.
Ndinokurangarira, pfungwa dzakaipa kwazvo, kubira voicemail yemumwe munhu kana account yeWhatsApp inodzivirirwa neSpanish Penal Code neBumbiro reSpain semhosva inopokana nekuvanzika kwemunhu., kuva nemitemo yakadzama pamusoro pemhando iyi yematsotsi epaterevhizheni mitsara yakasiyana-siyana yeConstitutional Court, uchifunga kuti inogona zvakare kuenderana nemhosva yeUzivi Kuba, nekuita zviitwa izvi iwe unogona kutsika pavhu rakanyorovera. Izvo zvakati, uye kana iwe uchifunga kuti wakambotambudzwa nekodzero dzako dzerudzi urwu, usakanganwa kuti Telematic Crimes Group yeSpanish Civil Guard ichafara kukubatsira iwe mune zvinotevera LINK kugadzirisa chichemo chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zviri nyore kubira WhatsApp account
Iwe murume, zvakanaka, pane kufunga kuti zvinogoneka sei kuti vakomana veWhatsApp vanga vasina kufunga izvi, ini ndingati zvinogoneka sei kuti makambani enhare abvumidze kupinda kubhokisi rako retsamba kubva kune imwe nhare nekutadza nePIN yakafanana neiyi.
Kana ndisina kutadza kunzwisisa, dambudziko riri kumakambani enhare, kwete neWhatsApp.
Mumwe nemumwe ane maonero ake
Wakanganwa kuisa sosi uye kana iwe uchida kuwedzera chimwe chinhu ... Yoigo inobvumira, 99% yevashandisi veYoigo vanoburitswa pachena
Masikati akanaka José.
Tiri pane peji muchiSpanish, tichishandisa izwi rekuti "sosi" pachinzvimbo sosi haribatsire vamwe vaverengi zvachose.
Kune rimwe divi, isu tiri webhusaiti muSpanish pasirese, uye zviri pachena kuti ndinoedza kusataura nezve chero kambani yerunhare nekuti kana chero mushandisi anotaura chiSpanish akasarudza kutaura zvakafanana nezve makambani efoni anounza kutendeseka kwekuchengetedzeka, vanogona akaita rondedzero isingaperi.
Ndakaseka Miguel, yakabuda ndisingadi, ndaive ndakatsamwa asi ndakatozvishaya.
Makandipa mhosva yekutaura "sosi"
Ndisati ndanyora chirevo ndakakunyorera maviri «tweets» kuitira kuti iwe uone kuti iwe wakanganwa kuisa «sosi» uye mune maviri «ma tweets» ini ndaishandisa izwi «sosi»
Kune rimwe divi, kune imwe chete kambani (iyo yandakambotaura kare) iyo inobvumidza kupinda kune voicemail yechero yevatengi vayo, zvirinani izvozvi, ndosaka ndakazvitaura. Handina kuvatarisa vese zvine musoro, asi kuno kuSpain ndakaedza iwo mana akakosha.
Ongorora: Usakanganwa kuisa font
Carlos Bravo akadaro
Zvinotaridza zvakanaka kwandiri kuti iwe unonyevera nezve kunetseka, asi kutsanangura maitirwo azvo nebvudzi nemasaini mafireworks. Inotevera chikamu "maitiro ekunyepera maPayPal account"? Zvakakosha!
Pindura kuna Carlos Bravo
Damian Morales akadaro
Iko kukanganisa pano hakusi iPhone Actualidad, asi iyo WhatsApp app uye vashandisi vanoishandisa. Izvo zvave zvichizivikanwa kwemakore nezve kushupika kune ino app, sezvo meseji dzayo dzisina kunyorwa uye kubhururuka zvakasununguka, zvichivabvumira kuti zviverengerwe zviri nyore nemunhu wese anokwanisa kuwana kune zvakabatana network. Iko kune zvirinani zvibodzwa zvinovimbisa kunyorera kwemameseji, izvo hazvishandiswe.
Chero zvazvingaitika, regai vagadzirise madhigi avo nekugadzirisa "matambudziko" anoonekwa nevashandisi. 🙂
Pindura Damian Morales
Jesu Amado Martin akadaro
Sezvaunotaura muchinyorwa, hausi kukurudzira chero munhu, asi ini ndinofunga unova mubatsiri anodiwa kune avo vanoda kupara mhosva iyi, saka chenjera
Pindura kuna Jesu Amado Martin
Kumhan'ara ikodzero uye kubva pasina mutemo wekutonga ndinenge ndiri mubatsiri anodiwa wemhosva iyi, nekuti neiyi nzira mapepanhau anga aine makesi anovhurwa zuva nezuva kana vachiongorora modus operandi yezvematongerwo enyika ane huwori semuenzaniso.
Uye zvakatonyanya kudaro kana muchinyorwa pane chirevo chakazara pamusoro pechinangwa uye mhedzisiro.
Izvo zvakakwana izvo zvinopa matanho ekutevera, kuitira kuti isu tese vanoverenga ichi chinyorwa tizive maitiro ekuchivhara uye titize kubva kunjodzi yefoni ... Zvinenge zvisina zvazvinobatsira kana ikangotiudza chete: "Yako WhatsApp account haibviri "uye haitsanangure iyo Sei, kuvhara uye kuchengetedza.
Yabamiah Veuliah akadaro
Pindura kuna Yabamiah Veuliah
Thanks iPhone News! Ini ndatoba 4 guasap account. Ndinozvida!
Ini ndatobira account yemukomana wangu, uye zvakadaro ... ndatenda nedzidziso!
Unogona kuisa padandemutande patinonzwa meseji yezwi, kuti ini ndatoenda goglee uye ini handioni webhu yekuisa nhamba yefoni uye ndinogona kuteerera kumashoko, kwaziso
Jorge Durá Ferre akadaro
Ini ndinofungidzira kuti vhidhiyo dzidziso haina kuiswa ne iPhone. Chero ani anopinda Google anoiwana pasina matambudziko.
Pindura Jorge Durá Ferre
Mangwanani akanaka Jorge.
Kana iwe ukabaya pane iyi link yeiyo vhidhiyo dzidziso iwe uchaona kuti munyori haana hukama neActualidad iPhone uye muchokwadi vhidhiyo yacho haisi yedu, nekuti haina kuburitswa mune chero yedu yepamutemo maakaunzi.
Iye geek mutengesi akadaro
Yakanaka kwazvo kudzidzisa maitiro ekuita izvi zvinhu izvi zvakakodzera kutaura mune yangu podcast
Pindura kune Iyo Geek Rori
Mufaro uye ndinokutendai.
Ini handioni nekuda kwekuomarara kwemibvunzo kuna Miguel Hernández maererano nechinyorwa ichi, icho pachezvangu ini chandinofunga chakanakira nyaya dzekuziva kusatendeka muwanano (dai vaivepo, pamwe mhinduro yaizove imwe). NDINOKUKURUDZIRAI Miguel nerubatsiro rwenyu uye kana muine mazano kana zvakadzama, ndingafarire kana mukatigovana. Ini ndinosiya yangu yega email. Kwaziso
... ini ndakanganwa kana iwe uchiziva chero chinoshanda chishandiso pachinangwa ichi, ndokumbira undizivise .. Kwaziso
Santiago Trilles Castellet akadaro
Zvakanaka hazviite izvi, ikozvino hazvigoneke kudarika kuchengetedzeka kwepini.
Pindura Santiago Trilles Castellet
Mukadzi iyeye haazive zvekuti haazive kuti dambudziko harisi neiri blog (kana nezviuru zvemamwe masayiti akatsanangura kunetseka uku) asi nekuchengetedzeka kudiki kweWhatsApp uye kuti kune ngozi sei kuishandisa mune zvimwe zviitiko, asi iyo internet uye chero clown inotaura chero chinhu kuti ibudise kubereka kana kubaya zvimwe ...
Captain Gutierrez akadaro
Kurudzira kuita mhosva. Mazuva ese unozvikunda.
Pindura kuna Captain Gutierrez
Mangwanani "Captain Gutiérrez" (zvinosekesa sei).
Ini ndinokusiira iwe chikamu chechinyorwa: «Izvi zviri pamutemo here?
Ini ndinokuyeuchidza iwe, kune pfungwa dzakatsauka, kuti kubira voicemail yemumwe munhu kana WhatsApp account inochengetedzwa neSpanish Penal Code uye Spanish Constitution semhosva inopesana nekuvanzika kwemunhu, kunyanya mutemo wezverudzi urwu rwematsotsi eterevhizheni a mitongo yakasiana-siana yemitongo yeConstitutional Court, uchifunga kuti inogona zvakare kuenderana nemhosva yeUzivi Kuba, kuita zviitwa izvi kunogona kutsika pavhu rakanyorovera. "Zvikadaro, uye kana uchitenda kuti warwiswa nekodzero dzako dzerudzi urwu, usakanganwa kuti Telematic Crimes Group yeSpanish Civil Guard ichafara kukubatsira paMINYANYA inotevera kugadzirisa zvichemo zvako."
Izvo zvakati, ini ndinokurudzira kusimudzira yako kuverenga uye kunyora hunyanzvi zvakare. Kwaziso nekutenda nekuverenga.
Tony o akadaro
Zvinosekesa kuti hachisi chinangwa chako kuti vanhu vazviite uye voshandisa mazwi anoti "chii chandingaite kuti ndibire" "wedu akabatwa" "anonyangira mu" "kubata kwenyasha" kunge tenzi wekubiridzira uyo anodzidzisa vadzidzi vake. Kana chiri chokwadi kuti ikodzero yekuziviswa, asi nzira yandinopa nayo ruzivo rwandinofunga (pfungwa dzevanhu) haingori yekudzidzisa chete asi kunyange inokanganisa.
Nenzira, kukundikana hakusi kubva kuWhatsApp, asi kubva kune vanoshanda vasina hanya nemabhokisi etsamba evatengi vavo
Pindura kuna toni o
apple anodaro akadaro
Rutsigiro rwedu kuna Miguel Hernández, dai akangopa nhau chete, vazhinji vangadai vari pagoogle kuti vaone kuti zvingaitwe sei, ndiko kuti, kana vasingazvione pano vachazviona kumwe kunhu. Iwe unofanirwa kuzvitarisa padivi rakanaka, maitiro ekuzvidzivirira, uye kana zvikaitika kwatiri, isu TESE tinoda kuziva kuti zvaitika sei. Ini ndinokukoka iwe kune yangu mhenyu podcast kuti utaure nezve musoro wenyaya @AppleDecir
Coper Gadzirisa akadaro
Ndakainzwa paTruckerGeek podcast uye handina kukwanisa kuzvitenda, asi ichokwadi. Ndokumbirawo musapa mazano, rambai chikamu chehunyanzvi chekuti zvinoitwa sei ndapota! Isu tatova nezvakakwana zvekuchengetedza zvikanganiso uye vasori kusimudzira nzira nyowani 🙁
Pindura kuCoper Gadzirisa
Ini ndakanyoresa ku9to5mac, asi ini handinzwisise yakawanda yenhau dzavo. Mazvita Actualidad Iphone nebasa renyu rekushandura panguva imwe chete. Chinyorwa chega chega chakaburitswa ne9to5mac chinogara chichishandurwa muchiSpanish mukati memaminetsi, izvo zvinokosheswa zvikuru neavo vedu vasingataure Chirungu.
pane chero munhu anoziva kwekuona vhidhiyo iyi? youtube yakadhinda